‘जीवनशैली सुधारौँ, मुटु जोगाउ’
१३ आश्विन २०७७, मंगलवार October 2, 2020 शुचि खबर	0 Comments
मुटुको रोगबारे जनचेतना फैलाउन मद्दत पुर्‍याउने उद्देश्यले प्रत्येक वर्ष सेप्टेम्बर २९ का दिन विश्व मुटु दिवस मनाइन्छ । ‘मन लगाऔँ, मुटु बचाऔँ ’ भन्ने नाराका साथ याे वर्षको विश्व मुटु दिवस नेपालमा पनि मनाइएको छ ।
विश्वमा पछिल्लो समय मुटु रोगबाट मृत्यु हुनेको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्क अनुसार विश्वमा हरेक वर्ष १ करोड ७५ लाख मानिसको मृत्यु मुटु र मुटु सम्बन्धी रोगका कारण मृत्यु हुने गरेको छ । विश्व मुटु दिवसको अवसरमा चिकित्सकहरुले मुटु स्वस्थ राख्न जीवन शैली सुधार गर्न सुझाव दिएका छन् । शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मुटुरोग विशेषज्ञ डा. मुरारी ढुंगानाले ३० देखि ७० वर्ष उमेर समूहमा प्रति १० जनामध्ये १ जनाको मृत्यु मुटुरोगका कारण हुने गरेको सहभागिले बताए ।
मुटु बचाउन तन, मन, धन, बुद्धि, विवेक, दयामाया सबै प्रयोग गर, मुटु रोगीलाई सहयोग गर, जीवनशैली सुधार गर, खानपिनमा ध्यान देऊ, रक्तचाप र सुगर नियन्त्रणमा राख भन्ने मुटु दिवसको मुख्य सन्देश रहेको डा. प्रकाशराज रेग्मीले बताए ।
मुटुको जीवनशैलीसँग सम्बन्धित छ । स्वस्थकर जीवनशैलीले मात्र मुटुरोग नियन्त्रणमा मद्दत पुग्छ ।
मैदाले बनेको, धेरै गुलियो, धेरै चिल्लो, तारेको, तयारी पेय पेयपदार्थ, धुमपमान, मद्यपान, मोटोपन लगायतले मुटुको रोग निम्त्याउँछन् । धेरै मानसिक तनाव नलिन र हलुका व्यायाम गर्न चिकित्सकहरूको सुझाब छ । स्वस्थकर जीवनशैली नै रोगबाट बच्ने मुख्य उपाय हो ।
← घिरौलाका किन खाने ? जानीराखौं फाइदाहरू
तातोपानी र रसुवागढी नाका खोल्ने सहमति →
आजको राशिफल, वि.सं. २०७७।०७।१३ (ई.स‌ं. 29 October 2020)
१३ कार्तिक २०७७, बिहीबार October 28, 2020 शुचि खबर	0
२४ घण्टामा थपिए १९११ जना कोरोना संक्रमित, उपत्यकामा मात्र ९४३